မထိုးဖောက်နိုင်သောလေဝင်လေထွက်၏အသက်ရှူလမ်းကြောင်းအမျိုးမျိုး | မိုက်ခရို
ရောဂါအမျိုးမျိုးအတွက်အသုံးပြုသောလေဝင်လေထွက်အမျိုးအစားမှာမတူပါ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်၊ ပါးလွှာသောလူနာများအတွက် single-level automatic ventilator ကိုအသုံးပြုသည်။ အဆုတ်ရောဂါများအတွက်အဆင့်နှစ်ခု ST mode ကိုလေဝင်လေထွက်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောဟောက်လွယ်သောလူနာဖြစ်ပါက Bilevel လေဝင်လေထွက်ကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်နိုင်သည်။ ရောဂါအမျိုးမျိုးအတွက်အသုံးပြုသောလေဝင်လေထွက်အမျိုးအစားမှာမတူပါ။ မျိုးစုံ Modes သာရှိပါတယ် Non-invasive လေဝင်လေထွက်။ အောက်ပါလေဝင်လေထွက်၏ mode ကိုဖော်ပြသည်။ သင့်အခြေအနေနှင့်အညီသင့်အတွက်သင့်တော်သောထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်နိုင်သည့်လေဝင်လေထွက်ကိုသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
လေဝင်လေထွက်တွင်အောက်ပါအတိုင်း CPAP, S, T, S / T စနစ်များရှိသည် -
လေဝင်လေထွက်၏ 1. CPAP mode ကို: စဉ်ဆက်မပြတ်အပြုသဘောလေကြောင်းဖိအား mode ကို
CPAP - အဆက်မပြတ်အပြုသဘောလေကြောင်းလိုင်းဖိအား Mode - အဆက်မပြတ်အပြုသဘောလေကြောင်းလိုင်းဖိအား, လူနာခိုင်မာတဲ့အလိုအလျောက်အသက်ရှူရှိပါတယ်, လေဝင်လေထွက်သည်လူနာကူညီရန်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာနှင့်သက်တမ်းကုန်ဆုံးအဆင့်များတွင်တူညီသောဖိအားပေး။ ၎င်းကို OSAS ပိတ်ဆို့ခြင်းအိပ်ပျော်စဉ်အသက်ရှူကျပ်ခြင်း၊ ပြင်းထန်သောအလိုအလျောက်ရှူရှိုက်မိခြင်းနှင့်လေဝင်လေထွက်ပေးသူမှအနည်းငယ်သာကူညီသောလူနာများအတွက်အဓိကအားဖြင့်အသုံးပြုသည်။ လူ့ခန္ဓာကိုယ်သည်လွတ်လပ်စွာရှူရှိုက်ခြင်း၊ ဖိအားကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဖိအားပေးခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်မှုရှိခြင်း၊ လှုံ့ဆော်သောအဆင့်နှင့်ရှူရှိုက်ခြင်းအဆင့်တို့၏ဖိအားများသည်တူညီသည်။ အသက်ရှူကျပ်ခြင်း (ဖိအားပေးမှု ၀ င်သည် 0) + ဖိအားထိန်းချုပ်မှုသည်အသုံးများသော Non-invasive mode ဖြစ်သည်။ ဇီဝကမ္မဗေဒဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများ PEEP (positive end-expiratory pressure) နှင့်ညီမျှသည်။ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချခြင်း၊ အထက်လေကြောင်းပွင့်လင်းပြည်နယ်ထိန်းသိမ်းရန်။
လေဝင်လေထွက်၏ 2. S mode ကို:
အလိုအလျောက်လေဝင်လေထွက်၏ S mode အလိုအလျောက်အသက်ရှူ mode --- အလိုအလျောက်အသက်ရှူ mode ကို, လူနာအလိုအလျောက်အသက်ရှူခြင်းသို့မဟုတ်လေဝင်လေထွက်အလိုအလျောက်လေဝင်လေထွက်မှအစပျိုးနိုင်, လေဝင်လေထွက် IPAP နှင့် EPAP သာထောက်ပံ့ပေးသည်, လူနာအသက်ရှူကြိမ်နှုန်းနှင့်လှုံ့ဆော်မှုအချိုး / လှုံ့ဆော်မှုအချိန်ထိန်းချုပ်ထားသည် အလိုအလျောက်အလိုအလျောက်သက်သောင့်သက်သာရှိသည့်အသက်ရှူသောလူနာများသို့မဟုတ်ဗဟိုအိပ်ပျော်စဉ်အသက်ရှူကျပ်သည့်လူနာများအတွက်။ အလိုအလျောက်အသက်ရှူကိရိယာ: လေဝင်လေထွက်နှင့်လူနာ၏အသက်ရှူနှုန်းကိုအပြည့်အ ၀ ထပ်တူပြုသည်။ လူနာ၏အလိုအလျောက်အသက်ရှူမှုရပ်တန့်ပါကလေဝင်လေထွက်သည်အလုပ်မလုပ်တော့ပါ။ ဖိအားထိန်းချုပ်မှု (စဉ်ဆက်မပြတ်ဖိအား) - ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော IPAP (inspiratory airway positive pressure) ဖိအားကိုလေဝင်လေထွက်စက်ပေါ်တွင်ဖိထားပါ။ ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော EPAP (expiratory airway positive pressure) ဖိအားကိုထိန်းသိမ်းရန်။ ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတော်လေးဘုံ Non- ထိုးဖောက် mode ကိုဖြစ်ပါတယ်။
လေဝင်လေထွက်၏ 3. T mode ကို:
အချိန်လေဝင်လေထွက်စနစ် T အချိန်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်အချိန် - အချိန်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်၊ လူနာသည်အလိုအလျောက်အသက်ရှူခြင်း (သို့) လေဝင်လေထွက်ကိုလွတ်လပ်စွာလေဝင်လေထွက်မဖြစ်ပေါ်စေခြင်း၊ လေဝင်လေထွက်စက်သည်လူနာ၏အသက်ရှူမှုကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်သည်၊ EPAP (အပြုသဘောဆောင်သည့်အဆင့်လေလေဖိအား)၊ EPAP (expiratory) phase airway အပြုသဘောဆောင်သောဖိအား), BPM, Ti (အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအချိန် / သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်အချိုး) ။ ဤပုံစံသည်အဓိကအားဖြင့်အလိုအလျောက်အသက်ရှူခြင်းမရှိသောသို့မဟုတ်အလိုအလျောက်အသက်ရှူနိုင်စွမ်းမရှိသောလူနာများအတွက်ဖြစ်သည်။ အချိန်ကိုအစပျိုးခြင်း: လေဝင်လေထွက်သည်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောကြိမ်နှုန်းဖြင့်အလုပ်လုပ်ပြီးလူနာ၏အလိုအလျောက်အသက်ရှူမှုနှင့်ထပ်တူမကျပါ။ ဖိအားထိန်းချုပ်မှု (စဉ်ဆက်မပြတ်ဖိအား) - ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော IPAP (inspiratory airway positive pressure) ဖိအားကိုလေဝင်လေထွက်စက်ပေါ်တွင်ဖိထားပါ။ ၎င်းသည်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော EPAP (expiratory airway positive pressure)) ကိုရှူရှိုက်မိသောလေဝင်လေထွက်တွင်ဖိအားပေးမှုအချိန် switching: ထိန်းချုပ်မှုရှူရှိုက်ခြင်း + ဖိအားထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ထိုးဖောက် mode ကိုခဲကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
လေဝင်လေထွက်၏ 4. S / T mode ကို: